Dhagayso: “Waa naga Xaaraan Daadinta Dhiiga Muslimiinta”. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On May 13, 2019 950 0
Kalimad cusub oo ay baahisay mu’asasada Alkataa’ib lana dhageysan karo muddo 19 ayuu Sheekh Mahad Warsame Abuu C/Raxmaan kaga hadlayaa arimo dhowr ah oo ku saabsan Jihaadka ka socda bariga Africa, kuna soo gudbinayaa fariimo muhiim ah oo ku wajahan Muslimiinta iyo Mujaahidiinta, waxaana ciwaan looga dhigay “Xurmada uu leeyahay dhiiga Muslimiinta”.
Sheekh Abuu C/Raxmaan ayaa ugu horreyn bogaadinaya weerarkii horaantii sanadkan ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 50 ruux oo isuga jira muwaadiniin reer galbeed iyo Yahuud ah, iyo weerarkii agu khaarijiyey ninkii aflagaadeeyay Rasuulka Allaah –Salalaahu Caleyhi Wasallam- ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Sheekh C/Raxmaan isdultaag kooban ku sameeyey cadeymaha ay banaanka soo dhigtay camaliyadii Gaalkacyo, iyo sida dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u garab istaageen ninka sheegtay Nabinimada ee aflagaadeeyay Rasuulkeena Sallaahu caleyhi wasallam.
“Waxaa waajib naga saaranyahay inaan ku Jihaadno cadowga caadeystay daadinta dhiiga Muslimka Itoobiyaankana gacal iyo sokeeye ka dhigtay waa nidaamka waxa loogu yeero federaalka kuwa caadeystay iney u basaasaan diyaaradaha Mareykanka ee Umaddeyna la beegsada duqeymaha joogtada ah. isbitaalkii Saakow ayey duqeeyeen,macaahidii Quraanka ayeey burburiyeen, da’yartii Quraanka baraneysay ayey laayeen, qaar kalane wey qafaasheen. waayeelo, dumar iyo caruur waxey daayeen ma jirto” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Sheekh Abuu C/Raxmaan ayaa si adag kaga hadlay xurmada dhiigga qofka Muslimka ah iyo halista in lagu dhiirado daadinta dhiigga Muslimiinta ee Xaaraanta ah, Isagoo Mujaahidiinta ku adkeeyey inay aad isaga ilaaliyaan daadinta dhiigga Muslimiinta, wuxuuna soo guuriyey Aayado qur’aan ah iyo Axaadiith uu ku bidhaaminayo halista ka dhalaneysa in si xaq daro ah loo daadiyo dhiigga qofka Muslimka ah.
Ugu dambeyntii wuxuu Sheekhu kalimadiisa ku soo gabagabeeyey fariimo dhowr ah oo ku wajahan dadka Muslimiinta ee ku nool magaalooyinka kujira gacanta Shisheeyaha iyo dowladda federaalka, iyo fariimo kale oo ku socda Mujaahidiinta la hardamaya Shisheeyaha ku soo duulay wadanka kuwaas oo uu ku booriyey inay sii laba jibaaraan halgankooda.
Sheekh Abuu C/Raxmaan wuxuu sheegay in maanta xaalada Jihaadka bariga Africa uu marayo marxalad aad u wanaagsan oo uu ka awood badan yahay sidii hore, islamarkaana ay Mujaahidiintu afka ciidda u dareen cadowga soo duulay isagoo heysta hub, awood iyo qalab ku filan, taasna ay ku timid fadliga iyo garab istaagga Allaah
Halkan ka dhageyso kalimada sheekh Mahad.